Posted by zizawa ⋅ 06/10/2010 ⋅ 38 Comments
A is the right thing for X to do.
အပေါ်က အဆိုငါးခုကိုကြည့်။ ဘာကွာလဲ။ ကွာတယ်လို့ထင်ရင် ဘာကွာလဲဆိုတာ ဆက်စဉ်းစားကြည့်။ thought experiment တွေလုပ်ကြည့်။ obligation, duty, ought to ဒီစကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် တခုနဲ့တခု ဘာကွာလဲ။
ပထမအုပ်စုမှာ နံမယ်ကြီးတွေက Descartes, Spinoza, Leibniz နောက်အုပ်စုက ခေါင်သူကြီးတွေက Locke, Berkeley, Hume ကြားထဲမှာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်က Kant ဒီငတ ခုနှစ်ကောင်ဘာတွေ ဘယ်လိုတွေးခဲ့လဲဆိုတာ အကြမ်းသိရရင် မဆိုးဘူး။
Posted by RITA | 07/10/2010, 02:13
:)) ဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ မပြုံးဘဲ ၀ါးလုံးကွဲ ရယ်သွားတယ် ကိုဝတုတ်။ ရေးပုံကို သဘောကျတယ်။
အဓိပ္ပါယ်က “နှမဆိုတာ လိုက်ပွဲ” တဲ့။ သူကောင့်းသား သူငယ်ချင်းများ ကောင်းမှုနဲ့ ကြားဖူးထားတာ။ 😀
Posted by ပိုင် (Pi) | 07/10/2010, 04:44
ဖီလော်ဆော်ဖာ Leibniz ဆိုတာ အဲဒိ ကဲကုလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိတဲ့ Leibiniz ပဲ။ နေရာတကာ ပါတယ်နော်..
Posted by zizawa | 07/10/2010, 09:10
Leibinez ပြောတာလည်း ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် political philosophy ကိုအနည်းဆုံး contract theory ကသုံးယောက် (Hobbes, Locke, Rousseau)နဲ့ ဒီ သီအိုရီကို ဝေဖန်ခဲတဲ့ Hume လေးယောက်ကို ပြီးအောင် ဖြတ်လိုက်ဦးမယ်စဉ်းစားတယ်။ ပြီးရင် ပြောခဲ့တဲ့ Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume နဲ့ Kant တို့အကြောင်းဆက်မလား စဉ်းစားတယ်။ တပတ်တပုဒ်ဆိုရင်တောင် သုံးလေးနှစ်ကြာမှ ပြီးမယ်ထင်တယ်။ 😀 Hegle နဲ့ Marx ကတော့ သတ်သတ်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်။ Hegel နဲ့ Marx က ကျွန်တော် အာအတွေ့ဆုံး အကြာင်းအရာတွေ။ ခေတ်သစ်မှာတော့ utilitarians တွေရယ်၊ ဒီ utilitarian တွေကို ဝေဖန်တဲ့ နံမယ်ကြီး John Rawls ရယ်၊ နောက် Locke ကိုပြန်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ Nozick ရယ်၊ နောက် သူတို့ရဲ့ critic တွေရယ်ဆိုရင် ကုန်သလောက်ရှိပြီ။ သူတို့ဘာတွေ တွေးခဲ့လဲဆိုတာ အကြမ်းသိရင် မဆိုးဘူး။
Posted by zizawa | 07/10/2010, 12:29
ပထမ ritako မေးတာပြန်ပြောရရင် (ဒီလိုပြောဖို့လည်း ခက်သားနော်)ဆိုတာ ကိစ္စတခု၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ရပ်တခုဟာ ဘယ်သူမှ ထိခိုက်တာ မပြနိုင်ရင်တောင် ခွင့်ပြုသင့်တယ်ဆိုတာ ပြောရခက်သားလို့ ပြောချင်တာ။ အဆို ၃ ကိုလက်ခံဖို့ ခက်သားနော်ဆိုတာကို ပြောချင်တာ။ စကားပြောလောကြီးသွားတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်ခွင့်ပြုသင့်မလဲ (မြင်ဖို့မခက်ဘူး)။ ဒါပေမယ့် ဝတ်လစ်စလစ် ၀တ်စားထားတဲ့ မိန်းခလေးတယောက်ကိုရော ခွင့်ပြုသင့်လား။ တဘက်မှာ လိင်တူဆက်ဆံတာကြည့်။ လိင်တူစိတ်ဝင်စားတာ ဘယ်သူ့မှ ထိခိုက်တာ မပြနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ခွင့်ပြုသင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲ့သလို ဘယ်သူမှထိခိုက်တာ မပြနိုင်လို့ လိင်တူဆက်ဆံတာ ခွင့်ပြုသင့်ယင် ၀တ်လစ်စလစ် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဟာ သူများကိုထိခိုက်တာ မပြနိုင်ရင် ခွင့်မပြုသင့်ဘူးလား။ (၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ တုံးလုံးကြားမှာ ဇာပါးပါးလေးပဲခြားတယ်။) ဓားနဲ့လိုက်ရမ်းတဲ့လူလို ရုပ်ပိုင်းထိခိုက်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီလို ၀တ်လစ်စလစ် ၀တ်စားတာဟာ offensive ဖြစ်တယ်ဆိုယင်၊ accepted cutom တွေကို ထိခိုက်တာမျိုးဆိုယင် ကိုယ်တဦးထဲ ဆန္ဒနဲ့ လုပ်ချင်တာတောင် တခါတလေ မလုပ်သင့်ဘူး၊ လုပ်ခွင့်မပြုသင့်ဘူး။ ဒီတော့ မိန်းမတယောက်က ပျော်လို့ သူ့သဘောနဲ့သူ ဖာသည်အလုပ်လုပ်တာ ခွင့်ပြုသင့်လား။ ကိုယ်ဝန်တော့ဖျက်ချခွင့်ရှိရင် ဖာရောဘာလို့ ခံခွင့်မရှိရတာလဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။ ဖာအလုပ်က ဘယ်သူ့ထိခိုက်လဲဆိုတာ ငြင်းရခက်တယ်။ (ဖာက ကျန်းမာရေးအသိလည်းရှိတယ်။ ပညာလည်း အသင့်အတင့်တတ်တယ်ဆိုရင် ဥပမာ pretty woman ထဲက JR လိုနေမှာပေါ့။ စကားမစပ် အဲဒိကိစ္စဂျူးနဲ့ မာဆေးမှာတွေ့တုန်းက သူ့ကိုမေးဖူးတယ်။ On what ground wouldafeminist object to voluntary hookerdom? ဆိုပြီးမေးဖူးတယ်။ မချောက မဖြေဘူး၊ ထွက်ပြေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ ပြောဖူးတယ်၊ ဂျူးက accidental feminist တဲ့။) accepted customs တွေထဲမှာလည်း priority ရှိမှာပေါ့။ ဥပမာ ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တာတွေဆိုရင် ထိပ်မှာရှိမယ်ထင်တယ်။ အဆို ၃ မှာ ‘ထိခိုက်မှု’ ဆိုတာဘာဆိုတာ တခါထပ်ရှင်းကြည့်။ အဲဒိကနေ ပိုရှင်းချင် ရှင်းလာနိုင်တယ်၊ ပိုရှုပ်ချင်လည်း ရှုပ်လာနိုင်တယ်။ စိတ်ဝင်စားယင် စမ်းကြည့်ပေါ့။
ခုတခါ ပိုင့်အလှည့် 😀 ကဗျာဆရာတွေကို ဖီလော်ဆော်ဖာတွေက သူတို့ ဘိုးအေကြီး Socrates လက်ထက်ကတည်းက contempt ရှိလာတာလို့ ပြေရာမယ်။ I decided that it was not wisdom that enabled [poets] to write their poetry, butakind of instinct or inspiration, such as you find in seers and prophets who deliver all their sublime messages without knowing in the least what they mean. Republic ထဲမှာ ပြောထားတာထင်တယ်။ ခုအပေါ်ကဟာက ဂူဂယ်မှာ ရှာလိုက်တာ။ ကဗျာဆရာတွေက သူတို့သုံးတဲ့စကားတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်ဖူးလို့ မြင်တာမို့ သူတို့ကို အဓိပ္ပါယ်တွေရှင်းလင်းရေးကို အဓိကဖန်ရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူတွေကcontempt ရှိတာနေမှာပေါ့။ Philsophy joke တခုရှိတယ်။ What is the politically correct behavior for philosophers? လို့ တယောက်ကမေးတယ်။ အဖြေက It’s treating poet nicely. တဲ့..
နောက်တခါ ကျွန်တော်အင်မတန် သဘောကျတဲ့ ဖီလော်ဆော်ဖာတယောက်က ဘာပြောဖူးလဲဆိုတော့ ‘တချိန်မှာ သူဟာ ‘ကဗျာဆရာ’ လို စိတ်ထဲရှိတာ မစဉ်းစားဘဲ ချရေးတာမျိုးမလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်’ လို့ပြောဖူးတယ်။ တကယ်လည်း သူ့တသက် ရေးခဲ့တာတွေဟာ စာအုပ်က လေးငါးအုပ်၊ ဂျာနယ် အာတီကယ်က အခု သုံးဆယ်ထက်မပိုဘူးထင်တယ်။ ဒီလောက်ပဲရှိတယ်။ ဆရာကြီး Karl Marx ကလည်း ကဗျာဆရာတွေကို queer fish ဆိုပြီး ချစ်စနိုးခေါ်ဖူးတယ်။ 😀 အဲ့တော့ ဖီလော်ဆော်ဖီနဲ့ ကဗျာ ပေါ်တင်စစ်ကြေညာထားမထားတော့ မသိဘူး။ ကဗျာတွေကို အဲ့သလို မထိတထိ ကလိတာမျိုးတော့ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖီလော်ဆော်ဖာအားလုံးတော့ ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ခင်တဲ့ ကဗျာဆရာတယောက်ကလည်း ကဗျာကို မခံစားတတ်ရင် လူဖြစ်ကျိုးမနပ်ဖူးလုိ့ ပြောဖူးတယ်ဗျ။
Posted by watote | 07/10/2010, 08:59
Posted by RITA | 07/10/2010, 09:26
bro က စကားပြောလောကြီးသွားတယ် ဆိုပေမယ့် bro ပြောချင်တာကို ကျွန်မ သိလိုက်တယ် ထင်တာပါပဲ။
Posted by RITA | 07/10/2010, 14:04
အတော်လျှော်ပြီး မောက်မာလှပါကလား။ ဒီကိစ္စဆွေးနွေးဖို့ ဘယ်သူ့အခွင့်အာဏာကို ယူစရာလိုသေးလဲ။ ဆွေးနွေးချင်တဲ့လူက ဆွေးနွေးမှာပေါ့။ မင်းအပူပါလား။ ကိုယ်မဆွေးနွေးချင်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် နေပေါ့။ နောက်ပြီး လူနည်းစုက သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ အိုးမဲသုတ်သွားလို့မရတာကို လက်ခံရင် ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးလို့ ဘာလို့ပြောနေသေးလဲ။
နောက်တခုက မင်းကြည့်ရတာ current issues တွေလည်း သိပ်ကျက်မိပုံမရဘူး။ feminist တွေက ဖာလုပ်ငန်းကို မိန်းမတွေရဲ့ ဂုဏ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကန့်ကွက်ကြတယ်။ တဘက်မှာ မိန်းမဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်ပိုင်တာမို့ ကိုယ်လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ စဉ်းစားမှုနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုကို feminist တွေက ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ထောက်ခံတဲ့ စဉ်းစားမှုက မိန်းမတယောက် ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်ဖာခံတာကို ဘာမှပြောလို့မရအောင် ကိုယ့်ရှုးကိုယ်ပတ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို သဘောမပေါက်ဘူး။ Catherine MacKinnon တို့ ဖာကိစ္စ အငြင်းအခုံလုပ်ကြတာ ဂူဂယ်မာရှာကြည့်။ စာများများဖတ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ဖတ်နိုင်အောင်ကြိုးစား။ စာရေးသူဘာပြောတယ်ဆိုတာကို ရမ်းသမ်းနားလည်ပြီး လျှောက်မရမ်းနဲ့။ ပြန်ရှင်းရတာ အချိန်ကုန်တယ်။
Posted by zizawa | 07/10/2010, 15:31
ကျွန်မပြောချင်တာက အခွင့်အာဏာရှိမှ ပြောရမယ်၊ ဆွေးနွေးရမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတချက်တော့ bro အယူအကောက်လွဲနေပါတယ်။
Posted by RITA | 07/10/2010, 15:52
Ok..another dip into this and hope no more..
Posted by zizawa | 07/10/2010, 16:13
(feminist တွေက ဖာလုပ်ငန်းကို မိန်းမတွေရဲ့ ဂုဏ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကန့်ကွက်ကြတယ်)
Posted by RITA | 07/10/2010, 16:01
(တချို့ ကိစ္စတွေဟာ လုပ်သင့်လား မလုပ်သင့်လားဆိုတာကိုသာ စစ်ကြောတာ။ ‘ဘာလုပ်မလဲ’ ဆိုတဲ့ အမိမေးတဲ့မေးခွန်းကို ကျုပ်လောလောယ်ဆယ် စိတ်မ၀င်စားသေးဘူး။)
Posted by RITA | 07/10/2010, 16:22
နောက်တခု ကျွန်မရေးတာမှာ ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး၊ ဒါမျိုး သင့်မသင့် သတ်မှတ်ဖို့ အခွင့်အာဏာ ဘယ်သူ့မှာ ရှိသလဲဆိုတာတွေ ရေးမိတယ်။
အဲဒါ “ဆွေးနွေးစရာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး” ဆိုတာ ဆွေးနွေးလို့ အဖြေထွက်မယ့် ကိစ္စလို့ ကျွန်မ မထင်ဘူး၊ “အခွင့်အာဏာ ဘယ်သူ့မှာ ရှိသလဲ” ဆိုတာ ဘယ်သူက သတ်မှတ်နိုင်မှာလဲ။ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာလဲ လို့ မေးချင်တာ။
ဆွေးနွေးဖို့မလို၊ အလုပ်မဟုတ်၊ bro မှာ ဒါ သတ်မှတ်ဖို့ အခွင့်အာဏာ တခုခု ရှိသလား မေးလို ပြောလိုရင်း မဟုတ်။
Posted by RITA | 07/10/2010, 16:25
ဒီနေရာမှာ မြန်မာတွေရဲ့ သဘောကို ရိပ်မိသလိုလိုရှိနေလို့ စာတွေ မလိုအပ်ဘဲ ထပ်ရိုက်ရမယ့်အရေး ကာကွယ်ချင်လို့ ထပ်ပြောချင်တာ ရှိသေးတယ်။ ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း။
ဒီလို ကိစ္စမျိုးမှာ… ဘယ်သူ့မှ မထိခိုက်စေဘူးဆိုရင် ဝတ်လစ်စလစ်နေမယ့် မိန်းမ၊ ပျော်လို့ prostitute လုပ်စားမယ့် မိန်းမတို့က သူတို့ မိဘဆွေမျိုးသားချင်းကို မထိခိုက်စေဘူးလား ဘာလား ညာလား ဟိုဟာလား ဒီဟာလားတွေက လာကောင်းလာနိုင်သေးတယ်။
(ကျေးဇူးကိစ္စမှာတုန်းက မောင်နှမသားချင်း တယောက်ခေါင်း တယောက်နင်းဆင်းလို့ ကူညီထောက်မ ပေးကမ်းရတာ ပြန်မသိတတ်တော့ ရင်ထဲမှာ ခံစားရတယ် ဘာညာကွိကွ ဆွဲထည့်သလိုပေါ့၊ ကျွန်မ ဘလော့မှာလည်း ကိုယ့်သားသမီးအလှည့်ကျမှ ဘာမှမဝတ်ဘဲနေမှ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် လာရေးတာမျိုးပေါ့)
Posted by RITA | 07/10/2010, 14:16
အဲ့ဒါဘာတွေပြောနေတာလဲ။ ရမ်းသမ်းပြီး ပြောချင်ရာပြောနေတာ ခက်တာပဲ။ မိသားစုအရေး ??? ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ ကျုပ်မှာ အရင်လို အချိန်များများစားစား မရှိဘူး။ တကယ်သိလို့ ကျုပ်ရေးတာကို ဝေဖန်ထောက်ပြတာကို ဘယ်သူ့ကိုမဆို ကြိုဆိုတယ်။ မသိဘဲ တတ်ယောင်ကားလာမလုပ်နဲ့။
Posted by zizawa | 07/10/2010, 15:36
ဒါက bro ကို ရည်ရွယ်ရေးတာ မဟုတ်ဘူး။
Posted by RITA | 07/10/2010, 15:49
ခုမှ တခု သတိရလို့။
Posted by RITA | 07/10/2010, 14:55
ဂျူး feminist ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်၊ feminism ဆိုတာကို သူနားလည်တယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်နဲ့ သူ့ကိုမေးတာ။ သူဘာဖြေမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ မေးတာပေါ့။ ဆိုင်တာမဆိုင်တာ မင်းအပူပါလား။ တောအထာတွေ လာမလုပ်နဲ့။ စိတ်မှကောင်းသေးရဲ့ လားမသိဘူး။ မင်းရော ကိုယ်ရေးချင်တာ မရေးဘူးလား။ ငါလည်း သူနဲ့ တွေ့ရင် မေးချင်တာမေးမှာပေါ့။ နောက်ပြီး မေးတဲ့မေးခွန်းက ဂျူးဘယ်အချိန် libido လာသလဲ မေးတာလဲမဟုတ်ဖူး။ သူ့ကို intelligent ဖြစ်မယ်ထင်လို့ ဗမာပြည်က မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေမလဲ သိချင်လို့မေးတာပေါ့။ တကယ့် bigot အစစ်နဲ့မှ လာတိုးနေတယ်။
Posted by zizawa | 07/10/2010, 15:41
Posted by RITA | 07/10/2010, 15:47
လိုက်မမှီလည်း ကိုယ်လိုက်မှီတာလုပ်ပေါ့ (တခုခု လုပ်ချင်သပဆိုရင်)။ နင်တင်ဒိုးကစားချင်ကစား။ reality show ကြည့်ချင်ကြည့်။ ဈေသွားချင်သွား။ လုပ်စရာတွေအများကြီးပဲ…
Posted by zizawa | 07/10/2010, 15:51
ကျွန်မ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာထိ bro လိုက်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ (ဒီလိုပြောလို့ စိတ်ဆိုးနေတယ် မထင်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ အံ့သြတယ် စိတ်ဆိုးမရလို့)
Posted by RITA | 07/10/2010, 16:06
ကျွန်မနောက်ပိုင်းမှာ ထပ်ရေးသမျှက bro ပြန်ဖြေထားတာပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်ပြီး ရေးထားခဲ့တာပါ။
အဲဒီထဲမှာ ခုနပြောသွားတဲ့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်း၊ prostitute လုပ်စားခြင်းအတွက် ပတ်ချာရိုက်နေတဲ့ သဘောဆိုတာ ထည့်မထားဘူး။ ဆိုင်တာလဲ မတွေ့ဘူး။
မှန်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဖတ်မိထား သိထားတဲ့ထဲလည်း မပါပါဘူး။ တကူးတက ရှာဖတ်ဖို့ စိတ်ပါမယ့် အကြောင်းအရာလည်း မဟုတ်ဘူး။ လူဟာ သူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူ၊ သူ့ဝင်စားမှုနဲ့သူပဲ။
Posted by RITA | 07/10/2010, 16:14
စက် ပိတ်ပြီးမှ ပြန်ဝင်မိတယ်။
Posted by RITA | 07/10/2010, 16:39
ဖီလော်ဆော်ဖီဆိုသည်မှာ လမိုက်ည သန်းခေါင်ယံ၌ မှောင်မိုက်နေသော အခန်းထဲတွင် လုံးဝမရှိသော ကြောင်နက်ကို မရမက ရှာဖွေနေသော မျက်မမြင် ဒုက္ခိတပင် ဖြစ်သည်တဲ့။ မင်းသိင်္ခရေးသွားတာ။ ဘာပဲပြောပြော အိပ်ယာက နိုးလာချိန်မှာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်း မရှိတော့သလိုမျိုးတော့ မဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာပဲ။ များများရေးအုံး ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။
Posted by ခိုင်စိုးလင်း | 07/10/2010, 17:11
ဆရာတုတ်က နွားပလာတာကျွေးသကိုးဗျ ယောင်ယောင်အိုးတွေ အဖက်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ .. ကာလကုန်တယ် သွားပေါ့
Posted by Bo Bo | 08/10/2010, 10:44
ကိုယ့်ညီ ပေးတဲ့ အကြံကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ အိမ်က မိန်းမကလည်း အလားတူပြောဖူးတယ်။ ခုဘလော့နဲ့ ပတ်သက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားဘလော့နဲ့ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပါ။ ပလာတာမစားတဲ့ နွားတွေအတွက်တော့ ဂျူံမစိုက်နဲ့တဲ့။
Posted by zizawa | 08/10/2010, 11:06
ကျွတ်မုန်းဝင် ဖြစ်နေပါပီး) အလဲ့….. ရှာဖတ်မနေပေမဲ့ ဒီဘလော့မှာ ရေးထားတာတွေ့ရင်တော့ စိတ်ပါရင် ဝင်ပြောမိမယ့် အကြောင်းအရာပါပဲ ဆိုပါလား။
Posted by Bo Bo | 08/10/2010, 12:11
I like philosophy! great..ur writting!
Posted by မြလေးသျင် | 09/10/2010, 09:52
blessed is the one who enjoys philosophy for it’s not easy to keep one’s flame of enthusiasm alive in the pursuit of it.. 🙂
Posted by zizawa | 09/10/2010, 22:32
ကျနော်ကတော့ ခပ်ရှင်းရှင်းပဲဗျို့။ ဒီအကြောင်းအရာကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ နက်နဲမှန်းလဲ သိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဝတုတ်တင်ပေးတော့ စိတ်ဝင်စားပီး လာဖတ်ပါတယ်။ မသိ၊ မတတ်၊ နားမလည်ပေမယ့် တတ်ယောင်ကား မလုပ်ပါဘူး။ အရူးတို့ ဘာသာဗေဒနဲ့ ဘုမသိ ဘမသိ ၀င်ဟောင်ရင် ကွဲရုံရှိတော့မှာပေါ့။ ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့််ကိုယ်ကို ဘာမှန်းသိအောင်၊ အကြောင်းအရာက ဘာမှန်းသိအောင် အရင်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ကွန်မန့်တွေကနေ ဆက်စပ်ပြီး ရသွားတဲ့အသိက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရူးလို့ ရူးမှန်းမသိတဲ့သူတွေ တယ်ပေါပါလားဆိုတာပါပဲ။ တန်းမတူဘဲ နေရာတကာ လူရာဝင်ချင်နေတဲ့ ချန်ပီယံ ဖွတ်အရူးများကို ဟန့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။
Posted by Aye Lei | 09/10/2010, 14:53
ဟိုဘက်ကနေ ဒီဘက်အထိလိုက်လာဧ။် ကွန်မန့်တစ်ချို့ ပိုစ့်နဲ့ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်မရသောကြောင့် ချာချာလည်သတည်း။ Law နဲ့ လောကနီတိ၊
Posted by မာရ်နတ် | 11/10/2010, 01:00
1+2=3is not corerct in phylosophy always. It can be reviewed after reading some theories in phylosophy. Not an easy job. For scholars it is very good but for laymen it is too high to critic. So you should say something that it was meant for students (especially for post grad phylosophy)
Posted by suu | 12/10/2010, 04:46
correct spelling :philosophy
Posted by suu | 12/10/2010, 05:21
Posted by Bo Bo | 19/10/2010, 19:05
မောင်ယုပိုင် ဘယ်သူဆိုတာတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့စာက ကိုယ်မကျေနပ်တာကို အချက်နဲ့အလက်နဲ့ ဥပမာ ဥပမေယျနဲ့ သေချာ မပြတာ ခက်တာပဲ။ ဘိုဘိုလန်းစင် ဒါကို ငါတို့ blog မှာ ဘာလို့ လာတင်တာလဲ။ ဒီ blog က ရန်ဖြစ်ဖို့ ထောင်ထားတဲ့ နေရာမဟုတ်ဖူး။ ကိုယ့်နေရာကိုယ်သိ။ ဒီလောက်ပဲ ပြောမယ်။
Posted by zizawa | 19/10/2010, 20:52
အဲဒါပဲ ကိုဝတုတ်ရေ၊ ဘလောက်ဆိုတာ ဈေးအိမ်သာနံရံစာလောက် ရေးတတ်တဲ့ ဘလပ်တွေကို နိဂလပ်သာ ထားကြပါစို့။
Posted by Bo Bo | 19/10/2010, 19:07
Posted by Ko Lynn | 22/10/2010, 09:36
Posted by Ko Lynn | 22/10/2010, 09:38